Ampitahao ny fanamelohana fanamelohana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03 > Ampitahao amin'ny mpitsara mpitsara
Miaina ao anatin'ny tontolo izay miaina voalohany araka ny teny filamatra hoe: "Tsara isika ary ny hafa samy ratsy avokoa". Isika isan'andro dia maheno andiany mivondrona amin'ny olona hafa noho ny antony ara-politika, ara-pinoana, firazanana na sosialy. Toa miharatsy ihany ny media sosialy. Ny hevitrao dia azo atolotra ho an'ny olona an'arivony mihoatra ny tiantsika mialoha alohan'ny fotoana hahafahantsika mieritreritra sy mamaly ny teny. Mbola tsy afaka nifampiantso haingana sy feo mafy daholo ny vondrona samihafa.
Jesosy dia mitantara ny tantaran'ny Fariseo sy ilay mpamory hetra izay mivavaka ao amin'ny tempoly: "Nisy roa niakatra tao amin'ny tempoly hivavaka, ny iray Fariseo, ny iray hafa mpamory hetra" (Lioka 18,10). Izy io dia ny fanoharana mahazatra momba ny "isika sy ny hafa". Nanazava tamim-pireharehana ilay Fariseo hoe: «Misaotra an'Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'ny olon-kafa aho, mpangalatra, tsy manao ny tsy marina, mpanitsakitsa-bady, na toa an'io mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho ary manome fahafolonkarena amin'izay rehetra ataoko. Fa ny mpamory hetra kosa nijanona lavitra, tsy te-hanandratra ny masony ho any an-danitra akory, fa nikapoka ny tratrany ary niteny: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko! » (Lioka 18,11-13).
Eto i Jesosy dia namariparitana ny zava-misy tsy azo toherina "manohitra ny hafa" amin'ny androny. Ny Fariseo dia nahita fianarana, madio ary madio ary manao izay mahitsy eo imasony. Toa izy ilay karazana "isika" izay te hanasa fety sy fankalazana ary manonofy iray hanambady ny zanany vavy. Ny mpamory hetra kosa, kosa etsy andaniny, iray amin'ireo "hafa", nanangona hetra tamin'ny olony izy noho ny fahefana an'i Roma ary halan'ny olona. Fa i Jesosy dia namarana ny tantarany tamin'ity fehezanteny ity: «Lazaiko aminareo: io mpamory hetra io dia nidina tany an-tranony fa tsy io akory. Fa izay manangana ny tenany dia haetry; ary izay manetry tena no hasandratra » (Lioka 18,14). Nanafatra ny mpihaino azy ny vokatra. Ahoana no ahafahan'io olona io, izay mpanota hita mazava eto, no ho olo-marina? Tian'i Jesosy ny mamantatra izay manjo ao anatiny. Miaraka amin'i Jesosy dia tsy misy fampitahàna "isika sy ny hafa". Ny Fariseo dia mpanota betsaka toy ny mpamory hetra. Ny fahotany dia miharihary ary tsy hitan'ny hafa izany, mora ny manondro ny "rantsan-tànana" amin'ny hafa.
Raha ny Fariseo amin'ity tantara ity dia tsy manaiky ny fahamarinan'ny tenany, ny fahotany sy ny avonavony, dia niaiky ny helony ny mpamory hetra. Ny tena marina dia tsy nahomby daholo isika ary mila mpanasitrana mitovy ihany isika. "Fa ny fahamarinana no lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino. Satria tsy misy fahasamihafana eto: samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manana voninahitra izay tokony ho eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy misy fahamendrehana manao fahasoavana amin'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny famonjena izay tonga tamin'i Kristy Jesosy » (Romana 3,22-24).
Ny fanasitranana sy ny fanamasinana dia avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino, izany hoe izay manaiky an'i Jesosy momba an'io raharaha io ary mamela azy hiaina ao aminy. Tsy ny hoe "izahay manohitra ny hafa", fa antsika rehetra ihany. Tsy anjarantsika ny mitsara olon-kafa. Ampy izay ny fahafantarana fa mila famonjena isika rehetra. Mpandray ny famindram-pon'Andriamanitra isika rehetra. Manana mpamonjy iray ihany isika rehetra. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra isika hanampy antsika hahita ny hafa tahaka ny fahitany azy, dia takatsika faingana fa ao amin'i Jesosy dia tsy misy isika sy ny hafa, isika ihany. Ny Fanahy Masina dia mamela antsika hahatakatra izany.